Amazon Integration - Propars E-export neAmazon, Ebay, Allegro uye Etsy
Zviri nyore kubata yako Amazon.com chitoro nePropars!
Isa zvigadzirwa zvako kuPropars uye uzvitengese paAmazon, yepasi rose e-commerce chikuva!
Propar Amazon ndiye Official service provider.
NePropars, kusangana kweAmazon, tanga kutengesa munyika dzese umo Amazon iri kushanda, kunyanya muAmerica, Europe neArabia Peninsula!
Mirairo yako kubva kuAmazon inounganidzwa pachiratidziro chimwe chete nemamwe maoda ako ese.
Unogona kutengesa zvigadzirwa zvaunowedzera kuPropars paAmazon nekukanda kamwe chete.
Sei vanhu vachitenga kubva kwandiri mushure mekuvhura chitoro paAmazon?
"Yakasarudzika mukutengesa kuAmazon
Kuvimbika kwemhando yeAmazon, kwete chitoro chako."
Propar Blog: Nei ndichifanira kutengesa zvinhu gumi neshanu paAmazon?
Kubatana neAmazon muhafu yekutanga ye2020
nhamba yevatengesi 651.000. Nhasiwo 3.145, paawa 131, 2 vatengesi paminiti
zvinoreva. Amazon pachiyero chemazuva ano
1.1 mamirioni vatengesi vanotora chikamu gore rega.
Kutengesa paAmazon.com kunoita sekurota kunoitika kune mazhinji mabhizinesi. Nekudaro, kuvhura chitoro uye kutengesa mumusika mukuru uyu zviri nyore kupfuura zvaunofunga. Kuti ukwanise kutengesa kuAmazon nePropars-Amazon kubatanidzwa, zvakakwana kuva nekunyoresa mutero kunoshanda muTurkey. Kana iwe uine rekodhi yemutero, zvese zvaunoda ndeye Propars kuti uve mutengesi mumusika mukuru wepasirese!
Kuve iyo yekutanga uye yega kambani muTurkey kubatanidza neAmazon.com, Propars iri zvakare paAmazon SPN runyorwa uye ndiyo mhinduro yeAmazon muTurkey.
Iwe unogona kubata zvitoro zvako zvese kubva panzvimbo imwe chete nekubatanidza zvimwe zvitoro zvako muPropars panel, kwauchazotengesa paAmazon.com.
Amazon.com Iyo Yakakura Musika Musika Panyika
Amazon ndiyo hombe pasirese e-commerce saiti ine vanopfuura mamirioni mazana matatu evashandisi vanoshanda uye yemazuva ese inodarika bhiriyoni remadhora. Kuve mutengesi mune ino ecosystem zvinoreva kuendesa zvigadzirwa zvako kupasirese. Chiteshi chiri nyore uye chakachengeteka chebhizinesi chinoda kuita e-Export.
Uye zvakare, kuziva kwemhando yeAmazon uye kuvimbika kunokudzivirira kubva kune yakakosha mari ine magumo asina chokwadi.
Zvigadzirwa zvako, izvo zvichatengeswa neUSD paAmazon.com, zvichawana kukosha muTL uye kuwedzera purofiti yako. E-Export inokupa mamirioni evatengi vangangove vatengi uye vanowana pamusoro pemitengo yekunze.
Kumisikidza chitoro paAmazon.com inzira yakakomba uye inorwadza. Nechikonzero ichi, ita shuwa kuti unogadzirira magwaro ako nemazvo uye zvizere. Zvinyorwa zvebhizinesi rako muTurkey zvinoshanda paAmazon.
Usakanganwa kuti iwe unogona kuwana rutsigiro rwehunyanzvi zvine chekuita neichi chiitiko kubva kuchikwata chePropar. Kana matanho akakodzera atorwa, dhizaini yekumisikidza idanho rinogona kupfuudzwa nekukurumidza uye nyore. Uyezve, kana iwe uchitova nechitoro cheAmazon, zvinongotora masekondi mashoma kuti uisanganise mune yako Propars pani.
Iwe unogona kusvika kune nyanzvi yePropar izvozvi kuti uwane ruzivo rwakadzama nezve chitoro setups uye kubatanidzwa.
Propar - Amazon Integration
NePropar, bhizinesi reAmazon muTurkey, zvinogoneka kuti bhizinesi rega rega ritengese paAmazon. Zvimwe zvezvinhu zvaunogona kubatsirwa nazvo muPropars-Amazon kubatanidzwa ndezvinotevera;
-Chigadzirwa rondedzero paAmazon.com,
-Odha manejimendi uye yemahara e-invoice,
-Otomatiki stock tracking,
-Mukana wekutonga weTurkey,
-Mutauro otomatiki uye kuyera kududzira,
- Chengetedza setup rutsigiro,